acca knowledge sharing2– Win Bo Myint Accountancy Training Centre
acca knowledge sharing 2
Kaizen Costing ဆိုတာဘာလဲ Standard Costing နဲ့ ဘာကွာသလဲ
လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ Market မှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် differentiation strategy ဖြစ်တဲ့ အများနဲ့ မတူ ထူးခြားတဲ့ Good and Service တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြသလို cost leadership လို့ခေါ်တဲ့ ကုန်စရိတ်အသက်သာဆုံးနဲ့ customer ကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆောင်ပြီး ယှည်ပြိုင်နေကြပါတယ်။
ဘယ်နည်းလမ်းပဲသုံးသုံး အဓိက ကတော့ လုပ်ငန်း အမြတ်အစွန်းတိုးတက်ဖို့့ပါပဲ။ လုပ်ငန်းတွေ အမြတ်တိုးဖို့ဆိုတာ ၀င်ငွေများပြီး စရိတ်တွေ လျော့ကျဖိုပါ။ Kaizen costing ဟာ ကုန်ကျစရိတ်လျော့အောင်စဉ်းစားတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ။
Kaizen costing ကို Japanese Firm တွေ က အသုံးပြုလာတာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်လောက်ရှိပြီ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Electronic နဲ့ Automobile Phone Industry တွေကို တော်တော်များများ အသုံးပြုလာတာကို လည်းတွေရတယ်။
Kaizen ဆိုတာ continuous improvement လို့ ခေါ်တဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။
ပုံမှန်ဆိုရင် လုပ်ငန်းတွေမှာ ထုတ်လုပ်မူစရိတ်တွေကို control လုပ်ဖို့ အတွက် Standard Costing ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Traditional Standard costing နဲ့ Kaizen အဓိက ဘာကွာလဲဆိုရင် Traditional standard costing က ကုန်ကျစရိတ်ကို လိုတာထက် မပိုအောင် control ပဲ လုပ်တယ်။ Kaizen costing က ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့သထက်လျော့အောင် စဉ်စားတဲ့ (cost reduction) ကို စဉ်းစားတယ်။
ဥပမာ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထုတ်တော့မယ်ုဆိုရင် ပစ္စည်းတစ်ခုမှာ ပါတဲ့ Function တစ်ခုချင်းစီအတွက့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်တယ်။ ပြီးတော့မှ Function တစ်ခုချင်းစီ ရဲ Target စရိတ်တွေကို ပေါင်းပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုစာရဲ့ စရိတ်ကို Target သတ်မှတ်တယ်။
ဒါအပြင် ပထမ တစ်ကြိမ်မှာ ကုန်တဲ့ ထုတ်လုပ်မူစရိတ်ထက် နောက်တစ်ကြိမ် ထုတ်လုပ်မူ စရိတ်က ပိုပြီးသက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာ ထပ်စဉ်းစားတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အဲဒီလို တောက်လျောက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့အောင် စဉ်းစားသွားပါတယ်။
နောက်ထပ် Standard costing နဲ့ ကွာခြားတာက Problem solution အပိုင်းပါ။
Standard costing မှာတော့ Standrard နဲ့ Actual ကွာရင် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာနဲ့ ရပ်လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ အထိ မသွားဘူး။
Kaizen costing မှာတော့ ၀န်ထမ်းကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးပြီး ပြသနာကို အဖြေရှာခိုင်းပြီး ဖြေရှင်းစေတာပါ။
U Win Bo Myint Accountancy Training Centre
ACCA. CPA, Dip IFR. LCCI.DA.ICM, ojt